၂၀၁၈ မှာ အနာဂတ်နည်းပညာတွေနဲ့ Next-Generation Fuel Cell Vehicle တွေကိုချပြသွားမယ့် Hyundai! – AutoMyanmar
၂၀၁၈ မှာ အနာဂတ်နည်းပညာတွေနဲ့ Next-Generation Fuel Cell Vehicle တွေကိုချပြသွားမယ့် Hyundai!
Hyundai အနေနဲ့ ပြောင်းလဲသွားမယ့် အနာဂတ်နည်းပညာအသစ်တွေ၊ Hyundai ရဲ့ next-generation hydrogen-powered fuel cell electric vehicle တွေ၊ Advanced Driver Assistance System (ADAS) အစရှိတဲ့ နည်းပညာတွေကို ၂၀၁၈ ဇန်နဝါရီ ၉ ရက်နေ့ကနေ ၁၂ အထိကျင်းပမယ့် CES (Consumer Electronics Show) 2018 မှာချပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Las Vegas မှာရှိတဲ့ Mandalay Bay (Level 2, Oceanside C) Convention Center မှာတွေ့ရမှာပါ။
CES မှာချပြမယ့် Fuel Cell Electric Vehicle ကတော့ Hyundai ရဲ့ eco-vehicle တွေထဲက edition အသစ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ eco-vehicle edition အသစ်ကတော့ “စွမ်းရည်သိပ်မကုန်ပဲအချိန်ကြာကြာမောင်းနှင်နိုင်တဲ့ကား” တွေကိုကမ္ဘာကြီးဆီပေးအပ်ချင်နေတဲ့ Hyundai ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်မြှောက်စေဖို့အကူအညီပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Eco-vehicle edition အသစ်အပြင် Hydrogen-powered mobility ကနေ Hydrogen-powered applications အဖြစ်ဆောင်ရွက်နေပုံတွေကိုလည်းချပြသွားဉီးမှာပါ။ နောက်တစ်ခုကတော့ Hyundai ရဲ့အနာဂတ် နည်းပညာဖြစ်တဲ့ ကားမောင်းနှင်သူနေရာကစဉ်းစားထားတဲ့နည်းပညာပါ။ AI voice recognition ပါဝင်တာကြောင့် မိမိရဲ့အသံနဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်မှာဖြစ်သလို မိမိရဲ့အဓိကအတွင်းပိုင်းအဓိက အင်္ဂါရပ်တွေကိုလည်း ထိခိုက်မှုရှိ/မရှိ စစ်ဆေးပေးနိုင်တဲ့ system လည်းပါဝင်တာကြောင့် အသက်အန္တရာယ်အတွက် စိုးရိမ်စရာသိပ်မလိုဘူးလို့ဆိုရမှာပါ။
အမိုက်စားနည်းပညာတွေကို ချပြမှာကတော့ကျွန်တော်အပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့ နေရာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေအနေနဲ့ သွားဖို့အချိန်မရဘူး ဒါပေမယ့် စိတ်ဝင်စားလို့ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ပါ link ကနေ သွားရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါတယ်။ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှာဖြစ်လို့ စိတ်လှုပ်ရှားမိမှာတော့အမှန်ပါပဲ။
ဒီပွဲမှာ Aurora company ရဲ့ CEO ဖြစ်သူ Chris Urmson လည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး ပြောင်းလဲ တိုးတက်လာတဲ့နည်းပညာရဲ့ အကြောင်းကို ပြောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကားချစ်သူတွေသာမက နည်းပညာပိုင်းနှစ်သက်သူတွေပါ အကြိုက်တွေ့စေမယ့်ပွဲလေးဖြစ်မှာပါ။ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကတော့ နာရီပိုင်းလောက်ပဲလိုတော့ပါတယ်။ Reminder လုပ်ထားဖို့ကတော့ ပွဲကြည့်ချင်သူတွေ ရဲ့တာဝန်သာဖြစ်ပါတယ်။
#automotive #corporate #events #technology #hyundai #ces2018 Hyundai to Debut All-New Autonomous Features on Next-Generation Fuel Cell Vehicle at CES 2018 https://t.co/w5snPn8lZC pic.twitter.com/Yv0vkXBUw1
— Lulop.com (@lulopdotcom) January 4, 2018
Aurora, Hyundai, Motor Show and Event